China Frozen ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Nongchuanggang
ကုန်ကြမ်းစစ်ဆေးခြင်း - ကုန်ကြမ်းကိုပထမပုံစံအနေဖြင့်ပြည့်စုံသောပုံသဏ္withာန်မရှိဘဲပုပ်စပ်ခြင်းမရှိ၊ ပျက်စီးခြင်းမရှိ၊ ရောဂါပိုးမွှားများ၊
စိမ်ခြင်း - ကြက်သွန်ဖြူတစ်လုံးလုံးကိုစင်ကြယ်သောရေတွင် ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်ခန့်စိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အခွံ - စိမ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုတစ်ချိန်ကကြက်သွန်နီအခွံနဲ့ဖယ်ပါ။ ဒုတိယအခွံ - စက်အခွံဖယ်ရှားသည့်စက်မှကြက်သွန်ဖြူအခွံမဖယ်ထားသောသူများအတွက်, လေးညှင်းပွင့်များကိုကြက်သွန်ဖြူအသားအရေသန့်ရှင်းစေရန်သေချာစေရန်လက်ဖြင့်အခွံချွတ်ပေးရမည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်အရွယ်အစားကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရစစ်ဆေးပြီးအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ စစ်ဆေးခြင်း - အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဝန်ထမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ ရောဂါများနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများဖယ်ရှားခြင်း၊ မကောင်းသောအရောင်၊ ပျက်စီးခြင်း၊ အမာရွတ်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဖဲအစက်များနှင့်အခြားချွတ်ယွင်းသောထုတ်ကုန်များနှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပါ။
ပိုးမွှားခြင်း - ၁၅ မိနစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဆိုဒီယမ်ဟိုက်ပိုလိုရစ်အက်စစ် ၁၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကြက်သွန်ဖြူဆန်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသေစေနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရောဂါပိုးများကိုရရှိသည်။ သန့်ရှင်းခြင်း - ဆိုဒီယမ်ဟော့ပိုလိုရီတမ်အရောအနှောကိုဖယ်ရှားရန်ရေနှင့်ဆေးပါ။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း - လေမှုတ်စက်ဖြင့်ကြက်သွန်ဖြူ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပါ။
လျင်မြန်စွာအေးခဲစေခြင်း - အထက်ပါကုသမှုအစီအစဉ်ပြီးနောက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကြက်သွန်ဖြူဆန်ကိုအသားတင်ခါးပတ်အမျိုးအစားရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်၏အပူချိန်သည် -25 ဖြစ်သည်℃နှင့်ထုတ်ကုန်၏ဗဟိုအတွက်အပူချိန် -18 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်℃ အမြန်အေးခဲပြီးနောက်။
ထုပ်ပိုးခြင်း - ထုပ်ပိုးခြင်းကိုအထူးသန့်ရှင်း။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောထုပ်ပိုးခြင်းအခန်းတွင်ပြုလုပ်ရမည်။0~ 10 အတွင်းနေရာအကျယ်အဝန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။℃.
သတ္တုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း - ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သတ္တုရှာဖွေစက်၊ အလုပ်ရုံအပ်နှံထားသည့် ၀ န်ထမ်းများအားဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ပြီးနာရီတိုင်းမှာ sensitivity test ပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားထိန်းချုပ်မှု ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သည်။
ရေခဲသေတ္တာ: ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်အချိန်မီသိုလှောင်ထားရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်သိုလှောင်ထားသည့်အပူချိန်ကို -20 တွင်ထားသင့်သည်±2℃ နှင့် -18 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောချောထုတ်ကုန်များ၏ဗဟိုအပူချိန်℃.
ပစ္စည်း 100% လတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူ
အရွယ်အစား 150-200 / 200-280 / 280-380pcs / kg
သိုးနွားဘဝ -18 ဒီဂရီအောက်မှာ 24 လ
ထုပ်ပိုး 10 ကီလိုဂရမ် / CTN
MOQ ၁၂ တန်
စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ FOB CIF CFR